Terms uye Conditions - Hanukeii
Aya Mamiriro Akawanda anonyatso gadzirisa hukama pakati peExpom Europa 2015 sl (Kambani iri muridzi wevatengesi Hanukeii) ine hofisi yakanyoreswa kuCalle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid uye neCIF ESB87341327 uye vatatu mapato (pano "Vashandisi") vanonyoresa sevashandisi uye / kana kutenga zvigadzirwa kuburikidza neye saiti yepamhepo chitoro. official webhusaiti Hanukeii (http://www.hanukeii.com", mushure me" Chitoro ").
2.1 Mushandisi anobvuma, kazhinji, kushandisa Chitoro, kutenga Zvigadzirwa uye kushandisa ese masevhisi eSitoro nekushinga, zvinoenderana nemutemo, hunhu, runyararo rwevanhu uye izvozvi General Mamiriro, uye iwe unofanirwa zvakare kurega kuishandisa nenzira ipi neipi inogona kukanganisa, kukuvadza kana kukanganisa mashandiro akajairwa uye kunakidzwa kweChitoro neVashandisi kana izvo zvinogona kukuvadza kana kukuvadza zvinhu uye kodzero dze Hanukeii, vatengesi vayo, Vashandisi kana vazhinji mune yechitatu bato.
3.1 Hanukeii inochengetera kodzero yekusarudza, chero nguva, Zvigadzirwa zvinopihwa kune Vashandisi kuburikidza neiyo Chitoro. Kunyanya, iwe unogona panguva ipi neipi kuwedzera Zvigadzirwa zvitsva kune izvo zvinopihwa kana zvinosanganisirwa muChitoro, zviri kunzwisiswa kuti kunze kwekunge zvapihwa zvimwe, Zvigadzirwa zvitsva zvakadaro zvichatongwa nezvakapihwa zveZviitiko Zvakawanda. Zvimwechetezvo, inochengetera kodzero yekumira kupa kana kufambisa mukana nekushandisa chero nguva uye pasina ziviso isati yamboonekwa yemakirasi akasiyana eMiti yakapihwa muChitoro.
4.1 Mukati menguva yakareba makumi maviri nemana (24) maawa, Hanukeii ichaendesa email kuMushandisi, ichisimbisa kutenga. Said email ichapa chiratidzo chekutenga kodhi, uye inodonongodza hunhu hwechigadzirwa, mutengo waro, mutengo wekutumira uye ruzivo rwemhando dzakasiyana dzekusarudza kuti ubhadhare zvigadzirwa ku Hanukeii.
4.4 Iyo odhi yekusimbisa yakatumirwa na Hanukeii Haisi kushanda seinvoice, chete seuchapupu hwekutenga. Invoice inoenderana nayo ichatumirwa pamwe neChigadzirwa.
5.1 Mushandisi ane kodzero yekutora iyo yaanogona kutaura nayo Hanukeii kuburikidza neemail pakero inotevera: bata @ hanukeii.com uye rega kubva pakutenga mukati menguva isingapfuure manomwe (7) mazuva ebhizinesi, akaverengerwa kubva pakutambira Chigadzirwa. Chigadzirwa chinofanirwa kutumirwa pamwe chete neyakagadziriswa mapepa ekudzosa uye kopi yechinyorwa chekutumira kana invoice, zvazadzikiswa, uye Mushandisi-mutengi anozove nemhosva yemutengo wakananga wekudzorera Chigadzirwa. Yakati kudzoka kuchaitwa zvinoenderana nemirairo iyo Hanukeii Zivisa Mushandisi mumhinduro kune yavo yekuzivisa nezvekudzora basa. Mushandisi anofanira kudzosa Chigadzirwa mukati menguva yakareba yemazuva manomwe (7) kubva ku Hanukeii ratidza fomu yekudzoka.
5.2 Kubvisa kunosanganisira kudzoserwa kwemari yakabhadharwa. Kuti aite izvi, mutengi anofanira kuratidza pane rekudzorera peji iyo nhamba uye mubati wekadhi rechikwereti kwariri Hanukeii Iwe unofanirwa kubhadhara. Izwi rekuti kubhadhara kwakataurwa richasimbiswa muMutemo.
6.1 Chero chiitiko, kuda kana kushandisa kwavo kodzero, Mushandisi anogona kutumira email kukero yekuonana @ Hanukeii.com.
7.2 Iyo yekuendesa sevhisi Hanukeii Inoitwa pamwe nekudyidzana akasiyana maratidziro mashandiro ekuzivikanwa mukurumbira. Orders haizozoshandirwa muPEN Bhokisi kana mumahotera kana mamwe ma kero asingagumi.
8.1 Mushandisi anobvuma kuti zvese zvinhu zvemuSitolo uye zve chimwe nechimwe cheZvigadzirwa, ruzivo uye zvinhu zvirimo, zvigadzirwa, chimiro, kusarudzwa, kurongeka uye kuratidzwa kwezviri mukati, uye zvirongwa zvemakomputa zvinoshandiswa mukati. hukama navo, inodzivirirwa nehungwaru uye maindasitiri kodzero dzeiyo Hanukeii kana vechitatu mapato, uye kuti General Mamiriro haataure nezvazvo maererano dzakataurwa maindasitiri uye nehungwaru kodzero dzesimba chero kodzero chero dziya dzinofungidzirwa zvakafanana.
8.2 Kunze kwekunge wagamuchirwa na Hanukeii kana sezvingaitwe nemutongi wechitatu ane kodzero inoenderana, kana kunze kwekunge izvi zvichitenderwa zviri pamutemo, Mushandisi haakwanise kubereka, kushandura, kushandura, kusanganisa, kudzosera injinjini, kugovera, kubhadhara, kukwereta, kuitisa, kana kubvumira kuwanikwa kweruzhinji kuburikidza nemhando ipi neipi yekutaurirana neveruzhinji chero chipi zvacho chezvinhu zvinotaurwa mundima yakapfuura. Mushandisi anofanirwa kushandisa zvishandiso, zvinhu neruzivo izvo zvaanowana kuburikidza nekushandisa Chitoro chete nezvezvinodiwa zvake, achimanikidza iye kuti arege kuita, zvakananga kana zvisina kunanga, kutengeswa kwekushambadzira kwezvinhu, zvinhu uye ruzivo zvinowanikwa kuburikidza zvimwe chete.
8.3 Mushandisi anofanira kurega kunzvenga kana kushandisa chero matekinoroji akagadzwa na Hanukeii kana nevechitatu mapato mu Chitoro.
9.1 Tichienderana neMutemo 15/99 LOPD, tinokuzivisa kuti yako data uye rumwe ruzivo rwunopihwa kuburikidza nefomu rekunyoresa, pamwe neizvo kubva mukuitisa kunoitwa, zvichabatanidzwa nekuchengetwa mufaira rekugadziriswa, ndeya Hanukeii, chero bedzi kubviswa kwayo kusati kwakumbirwa. Kurapa kwacho kunozoitirwa kukudziridzwa uye kuitiswa kwekutengesa, kutarisisa kunoonekwa kwezvinhu zvigadzirwa uye masevhisi aanowana pamwe nekuvandudzwa kweiyo kutariswa, pamwe nekusimudzirwa kwezvinhu zvayo uye zvigadzirwa uye izvo zvemakambani echitatu ane hukama Hanukeii.
Saizvozvo, iwe unoudzwa kuti yako data ichaitwa kuti iwanikwe kumakambani anoenderana nechinangwa chakaratidzirwa. Hanukeii Ichabata data idzi nekuvanzika kwakanyanya, kuve wega uye wega wekugamuchira, uye kusaita migove kana kutaurirana kune wechitatu mapato kunze kweanoratidzwa nemitemo yazvino.
Mushandisi anobvumidza pachena kutumira, kunyangwe kuburikidza nemagetsi nzira, na Hanukeii uye yezvinhu zvataurwa pamusoro apa, zvekushambadzira kutaurirana uye zvekushambadzira zvinopihwa nemakwikwi. □ hongu, ndinobvuma.
9.2 Mushandisi anogona chero nguva kushandisa kodzero yekuwana, kugadzirisa, kushora kana kudzima nekubata Hanukeii, neemail yakanyorerwa kubata @ Hanukeii.com, kubatanidza kopi yeNIF yako kana gwaro rekutsiva rinotsiva.
10.1 Hanukeii Iyo ichafambisa kushandiswa kwemapasita pachako kune mushandisi uyo anonyoresa zvakadaro pane webhusaiti. Aya mapassword achashandiswa kuwana masevhisi anopihwa kuburikidza neWebhusaiti. Mushandisi anofanirwa kuchengeta mapassword pasi pebasa rake ega mune zvakavanzika uye zvakanyanyisa kuvanzika, achifungidzira, saka, kangani kukuvadza kana mhedzisiro yemhando ipi neipi inowanikwa kubva mukutyora kana kuburitswa kwechakavanzika. Nezvikonzero zvekuchengetedza, password yekutaura telematic kune masevhisi ane hukama neiyo webhusaiti inogona kuchinjwa chero nguva nemushandisi. Mushandisi anobvuma kuzivisa Hanukeii nekukurumidza chero kushandiswa kusingabvumirwe kwepassword yako, pamwe nekuwanikwa nevasina mvumo yechitatu mapato mairi.
11.1 Hanukeii inoshandisa makuki kuitira kuti isimudzire masevhisi ayo, kufambisa basa, kuchengetedza kuchengetedza, kuverengera kuzivikanwa kweMushandisi, kugonesa kusvika kune zvido zvemunhu uye kutevedzera mashandisiro awo eSitoro. Ma cookie mafaera akaiswa pakombuta hard drive kana mundangariro yebrowser mune iyo folda yakagadzirirwa neyeMushandisi komputa inoshanda system yekukuzivisa iwe.